Jaakad jiingado ah oo ku habboon Shiinaha oo leh warshad hoodie iyo soosaarayaasha | Dufiest
jaakad jiinyeer ah oo jilicsan oo dhar ah oo loogu talagalay haweenka leh hoodie
100% dhar caag ah oo caag ah
Raad-raacista waa maqaal dhar ah oo ka kooban laba qaybood: surwaal iyo a jaakad badiyaa jiinyeer hore. Waxaa markii hore loogu talagalay in lagu isticmaalo isboortiga, inta badan ciyaartooyda inay xirtaan dharka tartanka (sida funaanada orodka iyo gaab ama dabaasha) iyo inay ka baxaan kahor tartanka. diiran inta lagu jiro maalmaha qabow ee guga / xagaaga, ragga jaakada raadraaca waxay leedahay adeegsiyo badan (marka laga reebo inay tahay uun shey aad u fiican) oo aad u badan tahay inaadan waligaa ka fikirin. jaakad oo leh surwaal isku xidha. Asal ahaan, waxay ahaayeen laga sameeyay qalabka sida cudbiga, terrycloth iyo polyester inkasta oo meelaha casriga ahi ay ku yimaadaan noocyo kala duwan oo farsamooyin iyo farsamooyin ah sida naylon, Gore-Tex iyo Sympatex oo u muuqda kuwo jilicsan oo qoyaanka ka baxa.
Hoodie khafiifka ah ee xarkaha leh waa xulasho kulul oo ka dhex jirta dadka adduunka oo dhan oo waxaan ku iibinaa qiimo jumlad ah.Waxaan nahay soo saaraha gaarka ah iyo soo-saaraha dharka isboortiga ee Shiinaha. Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, polyesterka iyo waarta iyo Dumarka hoodie ee khafiifka ah ayaa loo heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiilku waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track jackets and bottom, T-shirt, Tank top and fit calim dress. Waxaa loo isticmaali karaa guriga iyo shaqada labadaba Dayrta iyo jiilaalka, oo ah mid aad u jilicsan oo moodada ah.
Dharka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan 'zip' ee hoodie ayaa diirin doona qaabkaaga gaarka ah, qaabka caadiga ah. Iyada oo la adeegsanayo naqshad cusub ama shakhsi ahaaneed oo ku saabsan jilicsanaanta caatada ah iyo dhogorta waarta, tani waxay noqon doontaa zip cusub oo aad jeceshahay ilaa hoodie.
· Xirmo culus oo waara oo lagu sameeyay 40% cudbi / 60% caag
· Waxa ku jira jeebabka hore, fidinta dhexda miskaha iyo dhexda, iyo daboolka furka
· Jiinyeer bir ah oo u adkaysta Jam-ka ayaa lagu daray
Dhuxusha Dhuxusha waxay leedahay xargo madow.
· Side-seamed loogu talagalay qaab ahaanta dumarka
Machine Mashiinka ku maydh qabow midabbo u eg, hoos u qalaji. Waxaa laga yaabaa inuu yaraado dhaqida ka dib
Hore: Dharka dhaadheer ee dharka lagu xidho ee haweenka
Xiga: hoodie sweatshirt Daabacaadda daabacaadda ee marwada